FITSOAHANA NY FONJA : Sarona ilay gadra nitsoaka atao hoe Soloniaina Raharijaona
Araka ny loharanom-baovao voaray avy teny amin’ny Borigadin’Ambohidratrimo dia sarona, omaly maraina 13 febroary 2018, ny iray tamin’ireo gadra miisa telo nitsoaka teny Antanimora tamin’ny sabotsy lasa teo iny. 14 février 2018
Tokony ho tamin’ny fito ora maraina tany ho any izy io no tratra ary teo am-pangalana vilona teny an-tanimboly no nisamborana azy. Fantatra àry fa nandeha niafina teny amin’ny dadabeny teny Andriantany Ambohidratrimo izy io izao tratra izao.
Raha tsiahivina kely dia isan’ireo tambajotranà jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana izy ireo ary tompon’ antoka tamin’ny resaka fanolanana ihany koa. Marihana fa ny iray tamin’izy ireo antsoina hoe Soloniaina Raharijaona ity sarona ity raha ny tatitra voarainay omaly io. Ny roa ambiny kosa dia mbola atao fikarohana hatreto. Mitohy ny famotorana itsy farany amin’izao fotoana izao.